कोरोना भाइरसमा कुकुर र बिरालाको भूमिकालाई जोडेर बैज्ञानिकहरुले गरे नयाँ खुलासा:: Naya Nepal
कोरोना भाइरसमा कुकुर र बिरालाको भूमिकालाई जोडेर बैज्ञानिकहरुले गरे नयाँ खुलासा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई लिएर एक नयाँ खुलासा भएको छ । वैज्ञानिकहरूको एउटा नयाँ अध्ययनले यो पुष्टि गरेको छ कि कुकुर र बिरालाहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्छ, तर दुबैबाट कुनै पनि जनावर बिरामी हुने सम्भावना कम छ । एकै साथ यो कुरा पनि पत्ता लाग्यो कि बिरालोले कोरोना भाइरसप्रति कडा प्रतिरोधात्मक क्षमता राख्छ ।
न्यु योर्क टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार वैज्ञानिकहरूले घरेलु जनावरहरूले मानवमा कोरोना संक्रमित गर्न सक्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताएका छन् ।
यद्यपि संक्रमित बिरालाले अन्य बिरालाहरूलाई संक्रमित गर्न सक्छ । रिपोर्टका अनुसार कुकुरहरु भन्दा बिरालाहरुमा कोरोना भाइरस बढी सक्रिय हुन्छ । अनुसन्धानको क्रममा कुकुरहरूको माथिल्लो श्वसन पथमा भाइरस भेटिएन । यद्यपि, केहि अघिल्लो अध्ययनहरूले फरक नतीजा पनि ल्याएको छ ।
विश्वमा झण्डै ३ करोड ४० लाख मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन् । अर्कोतिर १० लाख १३ हजार भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । घरेलु जनावरहरू कोरोना संक्रमित भएका घटनाहरू एकदम कम मात्रै आएका छन् । जब बिरालो कोरोना संक्रमित हुनसक्छ तर किन तिनीहरू मानिसलाई संक्रमित गर्न सक्दैनन् ? उक्त अध्ययनका लेखक एन्जेला एम. बास्को लोथ भन्छन, ‘कोरोनाबाट संक्रमित मानिसहरुको संख्या यति धेरै छ कि मानिसहरूले वास्तवमा बिरालोलाई संक्रमित गरिरहेका छन् ।’
एन्जेलाले यो पनि भन्छन् कि बिरालोलाई कोरोना संक्रमण हुन सक्छ । धेरै जसो घटनाहरूमा मानिसहरूले बिरालाहरू देख्न सक्दैनन्, किनकि तिनीहरूसँग लक्षण हुँदैन । अन्वेषकहरूले यो पनि भने कि यदि घरमा कोही कोरोनाबाट संक्रमित छ भने बिरालालाई घरमा नै मात्र राख्नुहोस् किनकि यसले बाहिर जाँदा अन्य बिरालाहरूलाई संक्रमित गर्न सक्छ ।
सरकार र कांग्रेसबीच सम्बन्ध बिग्रिदै
काठमाडौं, १५ असोज । कोरोना महामारीका बेला राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचनामा उत्रिएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ ।
कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक र संसद दुबै मोर्चाबाट दवाव सिर्जना गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेसले भ्रष्टाचार, कोरोना महामारीका बेला सरकारले काम गर्न नसकेको, जनता भोकै मर्दा पनि चप लागेको जस्ता एजेण्डाहरू उठाएर सडक आन्दोलन गर्ने तयारीमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेसले सरकारविरुद्ध मोर्चा खोलेको छ । असोज १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी भएको छ ।
कांग्रेसले सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट आन्दोलन गर्‍यो भने सरकारलाई ठूलो दवाव पर्नेछ । कोरोना नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको आरोप खेपेको सरकारलाई तनाब हुनेछ ।
कोरोना महामारीका कारण धेरै सर्वसाधारणहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सरकारले अति विपन्न र मजदुरहरूलाई राहतको व्यवस्था नगरेको आरोप छ ।
कांग्रेसले आन्दोलन घोषणा गर्नुमा सरकारसँगको सम्बन्धमा बिग्रिदै गएको संकेत गरेको छ । सरकारले पनि प्रमुख विपक्षी दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने थियो । तर, नेकपाभित्रको विवाद मिलाउने, सत्ताको हलचल मिलाउनेभन्दा केही पनि काम हुन नसकेको कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।
‘सरकारले कुनै पनि काम गर्न सकेन । कांग्रेसले कोरोना रोक्न साथ दियो’, उनले भने, ‘कोरोना झन् बढिरहेको छ । जनता मरिरहेका छन् । भोकै मरेका छन् । कोरोनाका नाममा ब्रम्हलुट र भ्रष्टाचार भएको छ ।’
घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज बिहीबार अमेरिकी डलरलगायत केही देशको विनिमयदर घटेको छ।
आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको छ। हिजो १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको थियो।
त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकेको छ भने कतारी रियाल १ को खरिददर ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ५० रहेको छ।
त्यस्तै यूरोपियन यूरो १ को खरिदर मूल्य १३७ रुपैयाँ ८५ पैसा छ भने बिक्रीदर मूल्य १३८ रुपैयाँ ५५ पैसा छ।
त्यस्तै यूके पाउण्ड १ को खरिदर मूल्य १५१ रुपैयाँ ८ पैसा छ भने बिक्रीदर मूल्य १५१ रुपैयाँ ८५ पैसा छ।
हेर्नुहोस् अन्य देशको विनिमयदर